Maamulka Yahuuda Oo Magaalada Qudus Ka Wada Dhismooyin Yahuuda La Dajinayo. – Calamada.com
Maamulka Yahuuda Oo Magaalada Qudus Ka Wada Dhismooyin Yahuuda La Dajinayo.
calamada November 21, 2016 2 min read
Xukuumadda gumeysiga Sahyuuniyadda ayaa qorsheyneysa inay billowdo dhismaha inkabadan 30 kun oo guryo ah oo la hirgelinayo magaalada Al-Qudus ee Caasimadda Filastiin, kuwaas oo la dejinayo dadka Yahuudda ah.
Wargeys kasoo baxa dhulka ay Yahuuddu xoogga ku heysato ayaa ku waramay in qorshan oo la waday labadii sano ee lasoo dhaafay in si rasmi ah loo daah furi doono marka uu jagada madaxtinimada ee Wadanka Mareykanka uu la wareego madaweynaha la doortay ee Donald Trump, kaasi oo intii uu ku jiray ol-olaha doorashooyinka si cad u sheegay inuu sii xoojin doono taageerada uu siiyo Yahuudda.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Maamulka Sahyuuniyaddu ay doonayaan in deegaanno hor leh oo la dejiyo dadka Yahuudda ah in laga hirgeliyo Mandiqadda lagu magacaabo Raamuut iyo deegaanka Qalandiya ee Waqooyiga magaalada Al-Qudus.
Gudoomiye ku xigeenka magaalada Al-Qudus ee Maamulka Yahuudda ayaa sheegay in Xukuumadda Talaabiib ay labadii sano ee lasoo dhaafay hakad gelisay inay sii ballaariso dhismayaasha cusub ee ay dooneysay inay ka hirgeliso magaaladaasi, kadib markii sida uu sheegay ay la kulantay cadaadis caalami ah, isagoona tilmaamay in la gaaray wakhtii dib loo billaabi lahaa mashruucaasi.
Madaxweynaha dhawaan la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa bishii September ee lasoo dhaafay intii uu ku guda jiray ol-olihiisa doorashada wuxuu ballan qaaday in haddii uu ku guuleysto doorashada in magaalada Al-Qudus ee Filastiiniyiintu ay leeyihiin uu u aqoonsan doono caasimadda rasmiga ah ee Yahuudda.
Dhinaca kalena Maxkamad ku taalla deegaan galbeedka kaga beegan magaalada Al-Qudus ayaa lacag dhan $200 waxay ku ganaaxday Masjid ku yaalla deegaankaasi kadib markii Masjidku adeegsaday Cod baahiye, si ay Aadaanka u maqlaan dadka Muslimiinta ah.
Xukunkan ganaaxa ah ee ay ridday Maxkamadda ku taalla deegaanka lagu magacaabo Al-Ladaa ee galbeedka magaalada Al-Qudus wuxuu imaanayaa wakhti Baarlamaanka Sahyuuniyaddu ay ka doodayaan in gebi ahaanba Masaajidda kuyaalla dhulalka Filastiiniyiinta, gaar ahaan magaalada Al-Qudus iyo daanta galbeed in lagama mamnuuco in Aadanka ay u adeegsadaan Cod baahiye-yaasha.
Previous: Sarkaal Dowlada Federaalka Looga Dilay Muqdisho.
Next: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 21-02-1438 Hijri